Njehie | January 2020
192.168.1.1: ihe kpatara na ọ gaghị abanye na router, chọpụta ihe kpatara ya
Ndewo! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu abụọ edeghị ihe ọ bụla na blog. Ọ bụghị ogologo oge gara aga ka m nwetara otu ajụjụ site n'aka otu n'ime ndị na-agụ ya. Ihe kachasị mkpa dị mfe: "Gịnị kpatara na ọ gaghị agara router 192.168.1.1?". Ekpebiri m ịza ọ bụghị naanị ya, kamakwa ịnye azịza ya n'ụdị obere edemede. Ihe ndi ozo Esi mepee ntọala Ntak adighi aga 192.
Windows enweghị ike ijikọ Wi-Fi. Kedu ihe ị ga-eme na njehie a?
Nke ahụ bụ otu laptọọpụ yiri ka ọ na-arụ ọrụ (netbook, wdg.) Na-arụ ọrụ na netwọk Wi-Fi ma enweghị ajụjụ. Ma otu n'ime ụbọchị ị na - agbanye ya - na njehie ahụ wepụ: "Windows apụghị ijikọ na Wi-Fi ...". Ihe ị ga-eme Ya mere n'eziokwu, ọ bụ na laptọọpụ m. N'isiokwu a, m chọrọ ịgwa gị otu ị ga - esi wepu njehie a (ma ọ bụghị, dị ka omume na - egosi, njehie a bụ ihe zuru oke).
Njehie "BOOTMGR na-efu pịa cntrl + alt + del" na ákwà ngebichi mgbe ị na-agbanye Windows. Ihe ị ga-eme
Ndewo Ụbọchị ọzọ m zutere njehie na-ezighị ezi "BOOTMGR na-efu ...", nke pụtara mgbe a gbanwere laptọọpụ (site na ụzọ, Windows 8 arụnyere na laptọọpụ). A gbaziri njehie ahụ ngwa ngwa, wepụ ọtụtụ screenshots si na ihuenyo iji gosipụta n'ụzọ zuru ezu ihe ị ga - eme na nsogbu yiri nke ahụ (Echere m na ihe karịrị mmadụ iri na abụọ ga - eche ihu na ya) ... N'ikpeazụ, njehie dị otú ahụ nwere ike ịpụta maka ọtụtụ ihe: dịka ọmụmaatụ, Wụnye diski ike ọzọ n'ime kọmputa ma ghara ime ntọala kwesịrị ekwesị; rụgharịa ma ọ bụ gbanwee ntọala BIOS; mmechi nke kọmputa (dịka ọmụmaatụ, n'oge ike mberede ngwa ngwa).
Njehie "Uniteghi netwọk enweghị ohere Ịntanetị" ... Esi edozi?
Ndewo Enweghị ụdị njehie ọ bụla, Windows ga-abụ na ọ na-agwụ ike! Enwere m otu n'ime ha, ee e, ee e, m ga-eche ihu ya. Ihe kachasị mkpa nke njehie dị ka ndị a: ịnweta netwọk na-efu ma ozi "Unidentified network without access to the Internet" na-egosi na tray na-esote elekere ... Ọtụtụ mgbe ọ na-egosi mgbe ntọala netwọk efu (ma ọ bụ gbanwee): dịka ọmụmaatụ, mgbe onye na-ahụ maka ọrụ gbanwere ntọala ya ma ọ̄ bụ emelite (reinstalling) Windows, wdg.
Njehie 651, esi edozi?
Ndewo Ọ dịghị onye ọ bụla na-enweghị ike imehie ihe: ọ bụghị mmadụ ma ọ bụ kọmputa (dịka omume na-egosi) ... Mgbe ị na-ejikọta na Intanet site na PPPoE, njehie 651 na-eme mgbe ụfọdụ. E nwere ọtụtụ ihe mere ọ nwere ike ịpụta. N'isiokwu a, m ga-achọ ịtụle isi ihe kpatara ya, yana ụzọ ị ga-esi dozie njehie dị otú ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Njehie 2020